Ma Noqon Doonaa Xalka Daafaca Chelsea? Frank Lampard Oo Suuqa January Qorsheystay Saxeexa Daafaca Xoogan Oo Uu Qaab Aad U Fudud Ku Heli Karo. - Gool24.Net
Tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa sida lasoo warinayo doonaya inuu kooxdiisa dib ugula oo saxeexdo da’yarkii ay horeba u iibisay ee Nathan Ake oo haatan ka tirsan AFC Bournemouth.
Nugaylka daafac ee Chelsea ayay toddobaadkan banaanka soo dhigtay kooxda dhibtoonaysay ee Everton kaddib guuldarro 3-1 ah oo ay kusoo baday Goodison Park kulankii ugu horreeyay ee tababare Duncan Ferguson.
Lampard ayaa si weyn uga niyad jabsanaa qaab ciyaareedkii kooxdiisa ee kulankaas gaar ahaan midkii daafaca waxaana uu diyaar u yahay inuu suuqa January lacag galiyo sida uu sheegayo wargeyska The Telegraph.
Chelsea ayaan awooday inay suuqii xagaaga samayso wax saxeexyo ah kaddib ganaaxii laga saaray dhaq-dhaqaaqa suuqa balse in haatan ganaaxa laga qaaday ayaa ka dhigan inay ganacsi samayn karto badhtamaha xilliciyaareedka.
Ake oo 24 sano jir ah ayaa Chelsea kusoo biiray sanadkii 2011 balse waxa uu ku fashilmay inuu booskiisa safka koowaad helo waxaana uu ugu dambayn rasmi ugu biiray Bournemouth kaddib heshiis amaah ah oo guuleystay.
Heshiiskaas oo wakhtigaas 20 Milyan ku qabsoomay ayay haatan Chelsea aaminsan tahay inay kaliya 40 Milyan kula soo saxeexan karto daafacan ree Holland maadaama oo ay qoddob u ogolaanaya ku dareen heshiiskii hore taas oo ah mid u sahlaysa inay dib u helaan.